mardi, 18 février 2020 15:02
Jackie Chan: Vonona hanome « 132 000 euros » ho an’izay mahita fanafodin’ny « coronavirus »
Nanao fanambarana tamin’ny Weibo, izay tambazotra sosialy fampiasan’ny Sinoa, i Jackie Chan milaza fa vonona hanome iray tapitrisa Yuans na 132 000 euros, manodidina ny 528 tapitrisa Ariary, ho an’ny olona na fikambanana mahita fanafody mahasitrana ny coronavirus. Milaza ity mpilalao sarimihetsika malaza, avy any Hong Kong, ity fa « tsy te hahita intsony olona mijaly na koa maty noho io valanaretina io, nefa olona tokony mbola higoka ny hamamin’ny fiainana ». 65 taona izao i Jackie Chan. Ny sarimihetsika misy haiady no tena nampalaza azy. Nahoraka tamin’iny taon-dasa 2019 iny, ary nisy nampanantena fa ho avy teto Madagaskara i Jackie Chan, saingy tsy mbola tanteraka izany hatreto. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 18 février 2020 11:32
Ambilobe: Tany misy Olobe tsy miady zaza
Tonga nandravona ny disadisa tany Ambilobe, omaly, ny iraky ny fanjakana nahitana ny Minisitry ny filaminam-bahoaka CGP Randrianarison Fanomezantsoa Rodellys sy ny Jeneraly Sekreteram-panjakana eo anivon'ny fiarovam-pirenena miadidy ny Zandarimaria, jeneraly Ravalomanana Richard. Nihaino sy nitondra "Ala-olana" ireo Minisitra mirahalahy tompon'andraikitra amin'ny fandriam-pahalemana sy filaminam-bahoaka. Ny vahoaka izay hita ho mbola tao anaty hatezerana ary nitaky ny hampiharana fitsaram-bahoaka ireo tompon’antoka tamin’ny famonoana tamin’ny fomba feno habibiana ilay vehivavy mitondra vohoka, tsy hita fotoana lavalava ka fampahafantarana ny tamin’ny tambazotra facebook fahafatesany sy ny fahitana ny razana efa simba no nampitroatra ny olona.
lundi, 17 février 2020 22:11
Alasora: Nalevin’ny vady aman-janany tao an-trano ilay raim-pianakaviana
Ny zanany lahy, tsy dia salama saina, tonga tao amin’ny Fokontany Ankafy, Kaominina Alasora, Antananarivo Avaradrano nangataka ny hamafana ny anaran’ny rainy amin’ny rejisitry ny Fokontany no nampiahiahy ny Sefo Fokontany, satria tsy nisy filazana fahafatesana nandalo teo aminy. Nampandre ny Polisy avy hatrany ity farany ary dia nanokatra fanadihadiana ireto farany taorian’ny fitsirihana natao. Nampanantsoina nanaovana famotorana ny vady aman-janak’ilay raim-pianakaviana, tamin’izay no nibaradaka iretsy voalohany fa maty tamin’ny alarobia ilay rangahy ary nalevin’izy ireo ao anaty trano ipetrahan’izy ireo ihany. Nofongarina ny razana. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 14 février 2020 22:55
Antsirabe: Tovolahy iray maty nazeran'ny bisikilety, avy eo voahitsaky ny fiara
Tovolahy iray, mpianatra amina oniversite tsy miankina eto Antsirabe, no maty tsy tra-drano nianjera tamin'ny bisikilety nentiny, avy eo voahosin'ny fiara. Teo Sahatsiho, izay fidinana voalohany raha hivoaka ny tanànan'Antsirabe ka hianavaratra manaraka ny lalam-pirenena faha-7, no niseho ny loza androany tolakandro.
vendredi, 14 février 2020 18:26
Isoanala RN 13: Dahalo mpanakan-dalana roa lavon’ny Zandary, iray azo sambobelona
Nahitam-bokany ny fikarohana nataon’ny Zandary ireo dahalo nanafika taksibrosy « Carandal » nitondra mpandreha niainga avy ao Antananarivo hiazo an’i Tolagnaro ny alin’ny 12 febroary, niseho tao Sakoamanambadimanga, 7km atsimon’i Isoanala manaraka ny lalam-pirenena faha-13. Voatifitra teo amin’ny kibony ny mpamily, nentin’ireo dahalo nampijanonana ny fiara. Vola mitentina 12 000 000 Ariary miampy « panneaux solaires » roa, bisikileta roa, findain’ireo mpandeha no voaroba. Nentina tao amin’ny « Poste Fixe » Somotsoy ireo naratra, nalefa ao amin’ny CSB Isoanala koa ilay mpamily voatifitra.
vendredi, 14 février 2020 10:02
Antsohihy: Manahy ny fanimbana ny ezaka vitan'ny Tontolon'ny Fonja ny vahoaka
Mahagaga ny mponina ny fahenoana feo matetika fa ho esorina amin'ny toerany ny Lehiben'ny Fonja eto Antsohihy. Ambetin-dresaky ny Talem-paritra ny Fandraharahana ny Fonja eto an-toerana andavan'andro moa ny hoe esoriny ny Lehiben'ny Fonja ka mampisavorivory ny olona maro. Raha tsiahivina dia vao aingana no nanendren'ny fanjakana ity Leben'ny Fonja ity, ary tsy ampy 2 volana taorian'izay dia nisongadina ny zava-bitany, teo ny fanatsarana ny ivelany sy anatin'ny fonja iray manontolo (réhabilitation), ary vita ihany koa ny kianja fanaovana ny fananganan-tsaina na ny terrain de rapport, teo koa ny fampitaovana sy ny fanatsarana ary ny fitsinjarana ny sakafo ho an'ireo misazy. Izany dia niainga tamin'ny fanampian'ny olona tsara sitrapo, te ahita ny fanajana ny zon'olombelona sy hisian'ny fanamafisana ny fandriampahalemana, izay manana anjara toerana lehibe amin'izany ny fonja. Izay fahavitan'ny asa aingana izay ve no nampisy disadisa tamin'ity Talem-paritra miadidy ny fonja sy ity lehiben'ny Fonja nahita vahaolana izay tsy niankina taminy ity?
jeudi, 13 février 2020 14:29
Fandriam-pahalemana: Nohamafisina ny fisavàna ny moto sy ny fiara amin’ny alina
Miverina ny hetsika fitandroana fahalemana antsoina hoe : « Papango ». Efa nisy teo aloha ilay antsoina hoe «Dispositif papango» ary hamafisina izany amin’izao, hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria (SEG). « Aseho ny Vahoaka fa tokony hatoky ny mpitandro filaminana izy ary atao tsapan'ireo jiolahy ihany koa fa manao ny asany ny mpitandro filaminana ». Nanome toromarika koa ny SEG fa « hohamafisina ny fisavàna ny moto sy ny fiara amin’ny alina, ary tokony hanaiky ny fandaminana ny olona satria matetika dia moto no entin’ireo mpanao fanafihana manao ny asa ratsiny. Tokony hatoky ny olona fa manao ny asany ara-dalana ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao ».
mercredi, 12 février 2020 21:40
Toamasina: Jiolahy mitam-piadiana efatra voasambotra, Polisy iray naratra nandritra ny fifampitifirana
Enin-dahy mitam-piadiana nanafika mpandraharaha ara-toekarena iray avy any Mananara Avaratra raha nivoaka Shop Orange ity farany. Nanenjika an’ireo jiolahy eran’ny tanànan’i Toamasina ny Polisy nampian’ny Zandary vantany vao nahazo fanairana. Niditra an-tsehatra ihany koa ny Polisy iray isan’ireo miambina ny Banky Foibe, nitifitra avy hatrany rehefa tsy nety najanona ny jiolahy iray nitondra basy poleta rehefa teo akaiky Gastro Bazar Be. Voatifitry ny zandary teo amin’ny ranjony ilay jiolahy ka lavo ary dia noraisim-potsiny. Nanakana sy naka ankeriny fiara 4x4 an’olontsotra sendra nandalo ny jiolahy dimy. Notifirin’izy ireo ankitsirano ny mpamilin’ilay fiara ary maty tsy tra-drano. Nisy ny fifampitifirana tamin’ireo jiolahy sy ireo Polisy nanenjika azy ireo. Inspektera Polisy iray naratra voatitra teo amin’ny sorony. Voasambotra ny telo tamin’ireo jiolahy. Tafatsoaka tamina fiara Hyundai i10 miloko manga ny roa. Eo ampikarohana io fiara io ny mpitandro ny filaminana mitambatra ahitana Zandary sy Polisy, nanamafy ny sakana rehetra mivoaka ny tanànan’i Toamasina.
mercredi, 12 février 2020 15:24
Ampanihy Andrefana: Henan-tsokatra maina 350 kg sy sokatra velona 7 tra-tehaka saika hamidy
Saron’ny Zandary avy eo anivon'ny kaompania Ampanihy Andrefana tao Antranoavo, Kaominina Androhipano, Distrika Ampanihy Andrefana ny 05 febroary teo ny henan-tsokatra milanja 350kg efa maina natao tao anaty gony miisa 14 sy sokatra velona amin’ny karazany « radiata », izay biby arovana sao ho lany tamingana, miisa 7. Olona tsara sitrapo no nanao fanairana ny mpitandro ny filaminana, izay niara-niasa tamin'ny WWF sy ny MNP (Madagascar National Park) ka nahazoana ny vokatra. Nodorana ny 10 febroary ireo hena ho fiarovana ny fahasalam-bahoaka, natolotra ny "Chef cantonnement" ao an-toerana kosa ireo sokatra velona mba ahafahana mamerina azy amin'ny toerana tokony hisy azy.
mercredi, 12 février 2020 14:56
Antalaha: Voasambotra ilay mpividy lavanila amin’ny vola sandoka
Olona tao Ankoalabe, Distrika Antalaha, nivarotra lavanila masaka milanja 08 kg no lasibatr’ireto mpisoloky roa lahy, ny 05 febroary 2020. Rehefa vita ny adivarotry ny roa tonta dia nilaza ireo mpividy fa entina haseho ny "patron" aloha ny lavanila. Ny iray tamin’izy ireo nitondra ny lavanila 8kg, ny faharoa izay nitondra kitapo mihidy "cadenas" voalaza fa feno vola hividianana lavanila, nijanona niaraka tamin’ny tompon’ny entana teo. Nanao sambo nilentika anefa ilay nilaza fa hampiseho ilay lavanila hovidiana tany amin’ny « patron » ; najanon’ilay nitondra kitapo mihidy "cadenas" teo amin’ilay nivarotra lavanila ny kitapo teny aminy dia iny koa izy no nanjavona.
Page 11 sur 179